Tareenka xawaaraha sare ee Eurostar wuxuu kaa qaadaa Paris ilaa xarunta London wax ka badan laba saacadood, taas oo macnaheedu yahay, waxaad ku Bixisaan doonaa yar safarka waqti iyo adventuring waqti dheeraad ah. Sayidka, waxaan u aragnaa London inay tahay mid kale oo ka mid ah caasimadaha ugu wanaagsan Yurub ee tareenka loogu safro.
Ka duwan caasimadaha reer galbeedka Yurub, Prague waa caasimadda ah ee Czech Republic ee Yurubta Bari iyo mid ka mid ah magaalooyinka caanka dhexe ee Yurub ugu. Home mid ka mid ah maktabadaha caanka ah ee dunida ugu, Klementium ah, Prague oo soo bandhigtay in ay dhaqan agagaarka rukun kasta. Booqo Clock ah sumalka uguma, saacad ugu da'da hawlgalka ee dunida. Socod ku soco Fagaaraha Old Town, halkaas oo jidadka ka samysan iyo surimmada pedestrianized macnaheedu aad ka isticmaali karto saacadood ambaday aan walwal.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Best Yurub Capitals inay ku socdaalaan tareenka” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https:// www.saveatrain.com/blog/european-capitals-travel-train/?lang=so የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Tareenka Safarka Belgium, Tareenka Safarka ee Britain, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareen safarka Ruushka, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe